HESHIIS BUUXA: Barcelona Oo Heshiis La Gashay Robert Lewandowski & Shuruudda Kaga Timid Bayern Munich - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaHESHIIS BUUXA: Barcelona Oo Heshiis La Gashay Robert Lewandowski & Shuruudda Kaga Timid Bayern Munich
HESHIIS BUUXA: Barcelona Oo Heshiis La Gashay Robert Lewandowski & Shuruudda Kaga Timid Bayern Munich
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis la gaadhay weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski, waxaanay u jeedsadeen inay qaadaan tallaabada xigta oo ah inay miiska la fadhiistaan Bayern Munich si ay ugala xaajoodaan qiimaha iibka laacibkan.
Robert Lewandowski oo hore u caddeeyey inuu diyaar u yahay inuu iskaga tago Bayern Munich xagaagan, wakiilkiisana u fasaxay inuu la xaajoodo kooxaha kale, ayaa waxa uu aqbalay dalab uga yimid Barcelona waxaanay isla gaadheen heshiis dhamaystiran, sida uu xaqiijiyey wargeyska Marca.
Faahfaahinta heshiiska Barcelona & Lewandowski
Madaxweynaha Barcelona, Joan Laporta ayaa waxa wada-xaajood kula jiray Pini Zahavi oo ah wakiilka Robert Lewandowski, waxaanay labada dhinac si fudud iskula meel dhigeen heshiis iyagoon wax dhibaato ah la kulmin.
Maadaama uu ciyaartoygu diyaar u ahaa inuu fududeeyo wax kasta oo Barcelona ay usoo bandhigtay, sida mushaharka iyo gunnooyinka kale ee uu kooxda ku qaadan doono.
Waxa kale oo ay isla qaateen tirada sannadaha oo ah saddex sannadood, laakiin wargeyska Marca ma aanu caddaynin lacagta mushaharka ee ay Barcelona iyo Lewandowski isla meel dhigeen.
Bayern Munich ayaa meel adag ka istaagtay iibka Robert Lewandowski, waxayse ogyihiin in sannad kaddib uu laacibkani si xor ah uga tegi doono, taas darteedna waxay ka maagayaan inay si buuxda albaabada uga xidhaan.
Kooxda reer Germany ayaa dalbatay 50 milyan oo Euro oo ay ku xidhay Barcelona, taas oo haddii ay kooxda reer Spain bixiso ay la wareegi doonto Lewandowski.